Fametrahana zotra filamatra :: Fiara manodidina ny fitopolo voasazy tao anatin’ny roa volana mahery • AoRaha
Fametrahana zotra filamatra Fiara manodidina ny fitopolo voasazy tao anatin’ny roa volana mahery
Mifanindran-da­lana amin’ny andrana ho fana­­tsarana ny fitateram-bahoaka ny fanasaziana an’ireo mpitatitra mbola mandika lalàna. Mahatratra fitopolo eo ho eo ireo fiara noenjehina nanomboka tamin’ny fanasokajiana ny zotra D ho filamatra, araka ny tarehimarika azo avy amin’ny kaominina Ivato.
Ny tsy fanajana ny bokin’ andraikitra, toy ny fihodinana an-dalana no tena antony nanasaziana azy ireo. Misy ihany koa ireo nahatrarana ny taratasin’ny fiara tsy ara-dalàna na tsy manana tara­tasy mihitsy aza.
“Fampidirana amin’ny trano fihibohana miampy ny fakàna ny fahazoan-dalana hamilin’ireo mpamily sy ny hafa, izay miankina amin’ny fandikan-dalàna nataony no sazy nampiharina tamin’izy ireo”, hoy Rakotosolo Clément, lefitry ny Ben’ny tanànan’
Ivato , omaly.
Mitohy ny fitsirihana
Tsy manakana ny hetsika fametrahana ny zotra D ho zotra filamatra izao fanafai­zana an’ireo mihoa-pefy hatrany izao ireo. Noha­mafisin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny minisitera mpiahy ihany koa fa mbola tsy voafaritra ny fotoana hahavitan’ity fanatsarana ny zotra D ity.
“ Efa nisy hatrany ny fanentanana momba ny fitsipi-pitondran-tena sy fanarahana ny fepetra napetraka tamin’ ireo mpitatitra. Efa miditra amin’ny fanasaziana tokoa ankehitriny. Na izany aza, sarotra ny fanafoanana ao anatin’ny fotoana fohy ny gaboraraka izay nanjaka nandritra ny taona maro ”, hoy ny fanampim-panazavana.
Voalaza fa hatramin’ny valo ora alina no fe-potoana tokony hiasan’ireo mpitatitra amin’ny zotra D raha ny voa­rakitra ao anatin’ny bokin’ andraikitra ankehitriny. Nambaran’iry lefitry ny Ben’ny tanànan’Ivato iry kosa fa efa an-dalana ny fikarakarana ny bokin’andraikitra vaovao amin’izao fotoana izao.
Lanonana marolafy :: Manomboka ireo hetsiky ny fetim-pirenena
Voina an-dalambe :: Zazalahikely nianjera avy teny amin’ny tetezan’i Behoririka